“म एक्लो बृहस्पति भएँ” - मनिषा कोईराला
नेपालदृष्टि । केही दिनअघि मैले बाबाको तस्बिर राखेर “म एक्लो बृहस्पति भएँ”भनेर ट्वीट गरेकी थिएँ। त्यो बाबाकै भनाइ हो। उहाँले जीवनका अन्तिम समयमा यो कुरा लेख्नु भएको हो। उहाँले आफ्नो परिवार र नजिकका मान्छेका साथै पार्टीका साथीहरूले पनि आफ्नो कुरा बुझेनन् भनेर त्यसो भन्नुभएको रहेछ।
त्यो बुझ्नका लागि मलाई निकै समय लाग्यो। अहिले आएर उहाँका कतिपय पुस्तकहरू पढ्दै गर्दा धेरै कुरा बुझ्दैछु।
उहाँलाई जसले पनि आजको जस्तो दिन (जन्मजयन्ती) मा मात्र सम्झिन्छन्।
तर के हामीले उहाँको नीति, मूल्य र मान्यतालाई पछ्याएका छौँ?
के नेपाली काङ्ग्रेसले पछ्याएको छरु नेताहरूले पछ्याएका छन्रु यो मनन गर्नुपर्ने विषय हो।
सक्रिय राजनीति गर्दिनँ होला
मेरो जन्म नै यस्तो परिवारमा भयो कि मैले चाहेर पनि राजनीतिबाट छुटकारा पाउन सक्दिनँ।
हामीले खेलौनासँग रमाउने केटाकेटी उमेरमा नै राजनीतिका कुरा सुन्यौँ।
हातमा खेलौना हुँदैनथ्यो तर घरमा राजनीतिक बहस हुन्थ्यो। त्यसैले गर्दा राजनीतिसँग सम्बन्धित विषयको प्रश्नले मलाई पक्कै पनि कहिल्यै छाड्दैन। तर सक्रिय राजनीतिमा जानेबारे मैले अहिले सोचेकी छैन। सायद म लाग्दिनँ पनि होला।
बीपी कोइरालाबाट सिक्नुपर्ने कुरा
बीपीबाट अहिलेको पुस्ताले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा त म नेपाली हुँ भन्ने सबैले ठान्नुपर्‍यो। नेपाली हुनुमा सबैले गर्व गर्नुपर्‍यो। हामी आफू काम गर्दैनौँ तर अरूले गरेन भनेर मात्र दोष देखाउँछौँ। सरकारले गरेन भन्छौँ। त्यसो भन्ने भन्दा पनि मैले देशलाई के दिएँर, भनेर सोच्नुपर्छ।
आफू असल भए देश पनि बन्छ, समाज पनि बन्छ। (बीबीसी संवाददाता विष्णु पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
“म्याग्दी काली दोभानमा” बोलको म्यूजिक भिडियो युट्यूवमा (भिडियो सहित)
प्रदेश १ का बिभिन्न स्थलमा प्रहरीद्धारा आगो ताप्ने ब्यवस्था
लिखित रुपमा गुठी विधेयक फिर्ता लिन किन अलमल ?
यो संस्था गरिव जनताप्रति सर्मपित छ (भिडियो सहित)